၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားအဖွင့်ပွဲမှာ ရလဒ်ကောင်းရယူဖို့ အခြေအနေကောင်းတဲ့ အိမ်ရှင်ရုရှား
14 Jun 2018 . 12:53 PM
တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဘောလုံးပရိသတ်တွေ စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကတော့ ဒီနေ့(ကြာသပတေး)မှာ စတင်ပါပြီ။ အုပ်စုအဖွင့်ပွဲမတိုင်ခင် အိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ရုရှားနိုင်ငံက ကမ္ဘာ့ဖလားဖွင့်ပွဲကို ဘယ်လိုမျိုး ခမ်းခမ်းနားနားကျင်းပမလဲဆိုတာ ပရိသတ်တွေ မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့ရတော့မှာပါ။ အုပ်စုအဖွင့်ပွဲအဖြစ် အိမ်ရှင် ရုရှားနဲ့ အာရှထိပ်သီးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ ဆော်ဒီအာရေဗျတို့ ဆုံတွေ့မှာဖြစ်ပြီး အိမ်ရှင်အသင်း နိုင်ပွဲနဲ့ စတင်ဖွင့်လှစ်လား၊ ဆော်ဒီအာရေဗျအသင်းကပဲ မထင်မှတ်တာတွေကို လုပ်ပြနိုင်မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ . . .
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို အိမ်ရှင်အဖြစ် ကျင်းပခွင့်ရခဲ့တဲ့ ရုရှားအသင်းဟာ ကိုယ့်မြေ၊ ကိုယ့်ကွင်း၊ ကိုယ့်ပရိသတ်တွေရှေ့မှာ ထိုက်သင့်တဲ့ အောင်မြင်မှုရယူဖို့ ဆန္ဒပြင်းပြနေမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အသင်းမှာ သက်ကြီးကစားသမား များပြားနေတာက ပြဿနာတစ်ခုပါပဲ။ ချယ်လ်ဆီးကစားသမားဟောင်း ဇာကော့ဗ် Zhirkov (၃၄နှစ်)၊ အသက်(၃၈)နှစ်အရွယ်အထိရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ CSKA မော်စကို ၀ါရင့်နောက်ခံလူကြီး အီဂနာရှီဗစ်ခ်ျ Ignashevich တို့လို ကစားသမားတွေပါဝင်နေပြီး အသင်းရဲ့ပျမ်းမျှအသက်က (၃၀) ၀န်းကျင်ဖြစ်နေတာကြောင့် ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ သက်ကြီးအသင်းတွေထဲမှာ တစ်သင်းအပါအ၀င်ဖြစ်နေတယ်။ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲ ကစားစရာ မလိုတဲ့အတွက် ခြေစမ်းပွဲတွေ တောက်လျှောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ရလဒ်တွေကတော့ အားရစရာမရှိပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်၊ အောက်တိုဘာ၊ (၇)ရက်က တောင်ကိုရီးယားအသင်းကို အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း (၇)ပွဲဆက်တိုက် နိုင်ပွဲပျောက်ခဲ့တယ်။
ဆော်ဒီအာရေဗျအသင်းကတော့ ပရိသတ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား နာမည်တစ်ခုပါ။ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွေမှာ ခြေစစ်ပွဲ မအောင်မြင်ခဲ့ဘဲ အခုနှစ်မှ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲဆီ တစ်ကျော့ပြန်ခြေချခွင့်ရခဲ့တဲ့ ဆော်ဒီအာရေဗျအသင်းဟာ ပြိုင်ဘက်တွေကို ဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိနေတယ်။ ပြည်တွင်းလိဂ်အခြေစိုက် ကစားသမားတွေနဲ့ စပိန်ကလပ် လီဟာနက်စ်၊ ဗီလာရီးယဲလ်၊ လီဗန်းတေးအသင်းတို့မှာကစားနေကြတဲ့ အယ်လ်ရှာရီ Al-Shehri ၊ အယ်လ်ဒေါ်စာရီ Al-Dawsari ၊ အယ်လ်မူဝယ်လ်လက်ဒ် Al-Muwallad တို့ကိုလည်း ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်။ လူကြီးနဲ့ လူငယ်အချိုးညီညီ ဖွဲ့စည်းထားတာကြောင့် ဆော်ဒီအာရေဗျအသင်းရဲ့ ကစားသမားအင်အားက တောင့်တင်းမှုရှိတယ်လို့ဆိုရမယ်။
ရုရှားနဲ့ ဆော်ဒီအသင်းတို့ဟာ ၁၉၉၃ခုနှစ်တုန်းက ခြေစမ်းပွဲအဖြစ် ကစားခဲ့တဲ့တစ်ကြိမ်သာ ဆုံတွေ့ခဲ့ဖူးပြီး ဆော်ဒီအသင်းက (၄-၂)ဂိုးနဲ့ ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့တယ်။ ရုရှားအသင်းနည်းပြ ချာချီဆော့ဗ် Cherchesov အနေနဲ့ သူ အားထားရတဲ့ နောက်ခံလူ(၃)ဦးထဲက (၂)ဦး ဒဏ်ရာရနေတဲ့အတွက် ကစားကွက်အပြောင်းအလဲ လုပ်ဖို့ရှိနေပြီး (၄-၁-၄-၁)ပုံစံနဲ့ ပွဲထွက်လာဖို့ များတယ်။ CSKA မော်စကိုအသင်းရဲ့ လူငယ်ကြယ်ပွင့် ကွင်းလယ်လူ ဂိုလိုဗင် Golovin က ဆော်ဒီအသင်းကို ဒုက္ခပေးမယ့်ကစားသမားဖြစ်ပြီး တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက် သူနဲ့ ဇာဂိုယက်ဗ် Dzagoev တို့ကို တွဲဖက်အသုံးပြုသွားဖို့ရှိနေတယ်။ ဆော်ဒီအသင်းမှာလည်း ၀ါရင့်တိုက်စစ်မှူး အယ်လ်ဆယ်လာဝီ Al-Sahlawi ၊ ကွင်းလယ်က အယ်လ်ဂျက်ဆင် Al-Jassim ၊ အယ်လ်ရှာရီ Al-Shehri စတဲ့ကစားသမားကောင်းတွေရှိတယ်။ ဆော်ဒီအသင်းအနေနဲ့ အောက်အသင်းသာဖြစ်တာကြောင့် ရုရှားကို ဘာဖိအားမှ မရှိဘဲ ကိုယ့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပဲ ကြိုးစား ကစားမယ့်အနေအထားပါ။ အိမ်ကွင်းဖြစ်ပေမယ့် ရုရှားအသင်း ဆော်ဒီကို ခက်ခက်ခဲခဲကစားရဖို့ရှိပြီး နိုင်ရင်တောင် ဂိုးမပြတ်ဘဲ (၁-၀)လောက်နဲ့သာ အဖြေထွက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ Akhayar Sports ပရိသတ်တွေရော ဒီပွဲမှာ ဘယ်လိုရလဒ်ထွက်ပေါ်မလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းပေးပါဦး။
-ဆိုဗီယက်ယူနီယံကနေ ရုရှားအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးကတည်းက ၁၉၉၄၊ ၂၀၀၂၊ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွေမှာ ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်ကို တစ်ကြိမ်မှ မရောက်တော့ဘဲ အဲဒီ(၃)ကြိမ်စလုံး အုပ်စုတတိယနေရာသာ ရရှိခဲ့တယ်။
-ကမ္ဘာ့ဖလားအိမ်ရှင်အသင်း ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာက ၁၉၉၈ မှာ ပြင်သစ်အသင်းက နောက်ဆုံးပါပဲ။ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် ၂၀၁၀ ခုနှစ်က အိမ်ရှင်တောင်အာဖရိကအသင်း အုပ်စုက ထွက်ခဲ့ရတာကလွဲပြီး ကျန်တဲ့အကြိမ်တိုင်း အိမ်ရှင်အသင်းတွေ အုပ်စုကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်။
-၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲ အောင်ခဲ့တဲ့ ဆော်ဒီအာရေဗျအသင်းအတွက် ဒါဟာ (၅)ကြိမ်မြောက် ဆင်နွှဲမယ့်ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲပါ။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တုန်းက ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့် ရောက်ခဲ့တာက အမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့(၃)ကြိမ်စလုံး အုပ်စုနောက်ဆုံးသာရခဲ့တယ်။
– ဆော်ဒီအသင်းရဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား(၁၃)ပွဲမှာ Clean Sheet ရခဲ့တာ တစ်ပွဲပဲရှိပြီး ၁၉၉၄ က ဘယ်လ်ဂျီယံကို (၁-၀)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး(၉)ပွဲမှာ ဂိုးမသွင်းနိုင်တာက (၇)ပွဲအထိရှိခဲ့တယ်။
ရုရှား ၁-၀ ဆော်ဒီ
Photo:World Cup Russia Live Online,Wallpaper Heart,
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားအဖှငျ့ပှဲမှာ ရလဒျကောငျးရယူဖို့ အခွအေနကေောငျးတဲ့ အိမျရှငျရုရှား
တဈကမ်ဘာလုံးက ဘောလုံးပရိသတျတှေ စောငျ့မြှျောနကွေတဲ့ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကွီးကတော့ ဒီနေ့(ကွာသပတေး)မှာ စတငျပါပွီ။ အုပျစုအဖှငျ့ပှဲမတိုငျခငျ အိမျရှငျဖွဈတဲ့ ရုရှားနိုငျငံက ကမ်ဘာ့ဖလားဖှငျ့ပှဲကို ဘယျလိုမြိုး ခမျးခမျးနားနားကငျြးပမလဲဆိုတာ ပရိသတျတှေ မကျြဝါးထငျထငျ မွငျတှရေ့တော့မှာပါ။ အုပျစုအဖှငျ့ပှဲအဖွဈ အိမျရှငျ ရုရှားနဲ့ အာရှထိပျသီးအသငျးတဈသငျးဖွဈတဲ့ ဆျောဒီအာရဗေတြို့ ဆုံတှမှေ့ာဖွဈပွီး အိမျရှငျအသငျး နိုငျပှဲနဲ့ စတငျဖှငျ့လှဈလား၊ ဆျောဒီအာရဗေအြသငျးကပဲ မထငျမှတျတာတှကေို လုပျပွနိုငျမလားဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါပဲ . . .
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကို အိမျရှငျအဖွဈ ကငျြးပခှငျ့ရခဲ့တဲ့ ရုရှားအသငျးဟာ ကိုယျ့မွေ၊ ကိုယျ့ကှငျး၊ ကိုယျ့ပရိသတျတှရှေမှေ့ာ ထိုကျသငျ့တဲ့ အောငျမွငျမှုရယူဖို့ ဆန်ဒပွငျးပွနမှောပါ။ ဒါပမေဲ့ အသငျးမှာ သကျကွီးကစားသမား မြားပွားနတောက ပွဿနာတဈခုပါပဲ။ ခယျြလျဆီးကစားသမားဟောငျး ဇာကော့ဗျ Zhirkov (၃၄နှဈ)၊ အသကျ(၃၈)နှဈအရှယျအထိရောကျနပွေီဖွဈတဲ့ CSKA မျောစကို ဝါရငျ့နောကျခံလူကွီး အီဂနာရှီဗဈချြ Ignashevich တို့လို ကစားသမားတှပေါဝငျနပွေီး အသငျးရဲ့ပမျြးမြှအသကျက (၃၀) ဝနျးကငျြဖွဈနတောကွောငျ့ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲရဲ့ သကျကွီးအသငျးတှထေဲမှာ တဈသငျးအပါအဝငျဖွဈနတေယျ။ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲ ကစားစရာ မလိုတဲ့အတှကျ ခွစေမျးပှဲတှေ တောကျလြှောကျယှဉျပွိုငျခဲ့ပွီး ရလဒျတှကေတော့ အားရစရာမရှိပါဘူး။ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈ၊ အောကျတိုဘာ၊ (၇)ရကျက တောငျကိုရီးယားအသငျးကို အနိုငျရခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး (၇)ပှဲဆကျတိုကျ နိုငျပှဲပြောကျခဲ့တယျ။
ဆျောဒီအာရဗေအြသငျးကတော့ ပရိသတျတှနေဲ့ ရငျးနှီးပွီးသား နာမညျတဈခုပါ။ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၄ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲတှမှော ခွစေဈပှဲ မအောငျမွငျခဲ့ဘဲ အခုနှဈမှ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲဆီ တဈကြော့ပွနျခွခေခြှငျ့ရခဲ့တဲ့ ဆျောဒီအာရဗေအြသငျးဟာ ပွိုငျဘကျတှကေို ဒုက်ခပေးနိုငျစှမျးရှိနတေယျ။ ပွညျတှငျးလိဂျအခွစေိုကျ ကစားသမားတှနေဲ့ စပိနျကလပျ လီဟာနကျဈ၊ ဗီလာရီးယဲလျ၊ လီဗနျးတေးအသငျးတို့မှာကစားနကွေတဲ့ အယျလျရှာရီ Al-Shehri ၊ အယျလျဒျေါစာရီ Al-Dawsari ၊ အယျလျမူဝယျလျလကျဒျ Al-Muwallad တို့ကိုလညျး ရှေးခယျြခံခဲ့ရတယျ။ လူကွီးနဲ့ လူငယျအခြိုးညီညီ ဖှဲ့စညျးထားတာကွောငျ့ ဆျောဒီအာရဗေအြသငျးရဲ့ ကစားသမားအငျအားက တောငျ့တငျးမှုရှိတယျလို့ဆိုရမယျ။
ရုရှားနဲ့ ဆျောဒီအသငျးတို့ဟာ ၁၉၉၃ခုနှဈတုနျးက ခွစေမျးပှဲအဖွဈ ကစားခဲ့တဲ့တဈကွိမျသာ ဆုံတှခေဲ့ဖူးပွီး ဆျောဒီအသငျးက (၄-၂)ဂိုးနဲ့ ဂိုးပွတျအနိုငျရခဲ့တယျ။ ရုရှားအသငျးနညျးပွ ခြာခြီဆော့ဗျ Cherchesov အနနေဲ့ သူ အားထားရတဲ့ နောကျခံလူ(၃)ဦးထဲက (၂)ဦး ဒဏျရာရနတေဲ့အတှကျ ကစားကှကျအပွောငျးအလဲ လုပျဖို့ရှိနပွေီး (၄-၁-၄-၁)ပုံစံနဲ့ ပှဲထှကျလာဖို့ မြားတယျ။ CSKA မျောစကိုအသငျးရဲ့ လူငယျကွယျပှငျ့ ကှငျးလယျလူ ဂိုလိုဗငျ Golovin က ဆျောဒီအသငျးကို ဒုက်ခပေးမယျ့ကစားသမားဖွဈပွီး တိုကျစဈပိုငျးအတှကျ သူနဲ့ ဇာဂိုယကျဗျ Dzagoev တို့ကို တှဲဖကျအသုံးပွုသှားဖို့ရှိနတေယျ။ ဆျောဒီအသငျးမှာလညျး ဝါရငျ့တိုကျစဈမှူး အယျလျဆယျလာဝီ Al-Sahlawi ၊ ကှငျးလယျက အယျလျဂကျြဆငျ Al-Jassim ၊ အယျလျရှာရီ Al-Shehri စတဲ့ကစားသမားကောငျးတှရှေိတယျ။ ဆျောဒီအသငျးအနနေဲ့ အောကျအသငျးသာဖွဈတာကွောငျ့ ရုရှားကို ဘာဖိအားမှ မရှိဘဲ ကိုယျ့အတှကျ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျပဲ ကွိုးစား ကစားမယျ့အနအေထားပါ။ အိမျကှငျးဖွဈပမေယျ့ ရုရှားအသငျး ဆျောဒီကို ခကျခကျခဲခဲကစားရဖို့ရှိပွီး နိုငျရငျတောငျ ဂိုးမပွတျဘဲ (၁-ဝ)လောကျနဲ့သာ အဖွထှေကျဖို့ရှိနပေါတယျ။ Akhayar Sports ပရိသတျတှရေော ဒီပှဲမှာ ဘယျလိုရလဒျထှကျပျေါမလဲဆိုတာ ခနျ့မှနျးပေးပါဦး။
-ဆိုဗီယကျယူနီယံကနေ ရုရှားအဖွဈ ပွောငျးလဲခဲ့ပွီးကတညျးက ၁၉၉၄၊ ၂၀၀၂၊ ၂၀၁၄ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲတှမှော ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ကို တဈကွိမျမှ မရောကျတော့ဘဲ အဲဒီ(၃)ကွိမျစလုံး အုပျစုတတိယနရောသာ ရရှိခဲ့တယျ။
-ကမ်ဘာ့ဖလားအိမျရှငျအသငျး ခနျြပီယံဖွဈခဲ့တာက ၁၉၉၈ မှာ ပွငျသဈအသငျးက နောကျဆုံးပါပဲ။ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျ ၂၀၁၀ ခုနှဈက အိမျရှငျတောငျအာဖရိကအသငျး အုပျစုက ထှကျခဲ့ရတာကလှဲပွီး ကနျြတဲ့အကွိမျတိုငျး အိမျရှငျအသငျးတှေ အုပျစုကို ကြျောဖွတျနိုငျခဲ့တယျ။
-၁၉၉၄ ခုနှဈမှာ ပထမဆုံးအကွိမျ ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲ အောငျခဲ့တဲ့ ဆျောဒီအာရဗေအြသငျးအတှကျ ဒါဟာ (၅)ကွိမျမွောကျ ဆငျနှဲမယျ့ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲပါ။ ၁၉၉၄ ခုနှဈတုနျးက ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ ရောကျခဲ့တာက အမွငျ့ဆုံးအောငျမွငျမှုဖွဈပွီး ကနျြတဲ့(၃)ကွိမျစလုံး အုပျစုနောကျဆုံးသာရခဲ့တယျ။
– ဆျောဒီအသငျးရဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလား(၁၃)ပှဲမှာ Clean Sheet ရခဲ့တာ တဈပှဲပဲရှိပွီး ၁၉၉၄ က ဘယျလျဂြီယံကို (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲမှာဖွဈပါတယျ။ နောကျဆုံး(၉)ပှဲမှာ ဂိုးမသှငျးနိုငျတာက (၇)ပှဲအထိရှိခဲ့တယျ။
ရုရှား ၁-၀ ဆျောဒီ